सफल हुने कि खुशी?
सफल बन्न असाधारण (extraordinary) हुन पर्दैन, पृथक (unique) भईदिए पुग्छ । एक्स्ट्रा अर्डिनरी जोकोही हुन सक्दैन, तर हरकोही मान्छे अर्को मान्छे भन्दा फरक त हुन्छ नै । तसर्थ सबै मान्छेमा सफल हुन सक्ने गुण रहेकै हुन्छ, मात्र खुट्ट्याउन सक्नु पर्दछ ।
मानिस मानिसबीच हुने कुनै सम्बन्ध सामान्य भईकन पनि अचम्मका हुन्छन् । सबैका हुन्छन् यस्ता चिन्जान, स्थान र पात्र फरक भएतापनि यस्ता घटना घटिरहेका हुन्छन् । प्राय यो भोगिन्छ तर कसैलाई भनिन्नँ । धेरैअघि मेरो एउटा शिक्षक थिए । खासै राम्रो पढाउदैन थिए । धेरै बिद्यार्थीहरु फेल भएपछि आक्रोशले उस्को नाम केकेमात्र राख्न भ्याएनन् । मेरो भने उसँगको सम्बन्ध मध्यम नै थियो । जीवनमा धेरै उतारचडाब आयो । कसैबाट सुनेथेँ उस्को लागि बितेका बर्षहरु त्यति राम्रा रहेनन् । करीब १२−१३ बर्षपछि उनी एकदिन काम बिशेषले म काम गर्ने अफिसमा आए । म भएको ठाउँमा आएर सिधै भने− कति पैसा दियो भने यो जागिर पक्का हुन्छ? मेरो वाइफलाई लगाउनु पर्यो । श्रीमतीको लागि जागिरको आवेदन दिन आएका रहेछन् । मैले खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने हो दाँयाबाँया त यहाँ हुँदैन भनेँ । उनले अझै जिद्दी गरे । ककस्लाई कतिकति दिनु पर्ने हो देऊ काम मिलाए बापत तिमीपनि राख तर जसरी नि मिलाऊ । म पन्छिन खोजेपछि उनी हतोत्साहित भएर जोडजोडले कराँउन र गाली गर्न थाले । मैले पनि जवाफ फर्काएँ । केही बेरको चर्काचर्कीपछि मैले यही दिन देख्नलाई तिमीहरुजस्तो चेलालाई पढाए
१९ सौ शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि महिलाहरुलाई सामाजिक जीवनबाट मुख्यतया राजनीति, शिक्षा र अरु बिभिन्न प्रतिष्ठित पेशाहरुबाट बञ्चित गरिन्थ्यो । हिन्दू धर्ममा सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र सम्भारकर्ता तीनै देवता ब्रह्मा, बिष्णु र महेश्वर पुरुष अवतारका रुपमा चित्रित छन् । क्रिश्चियनमा महिला (हब्बा) लाई पुरुष (एडम) को करङ्कै एउटा अंशको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । महिला र पुरुषको बारेमा अररस्तुको पालामा चर्चित अवधारणा स्थापित थियो जस्ले आजसम्मको सोचलाई प्रभाव पार्दछ । त्यस धारणाले महिला केवल अपूर्ण पुरुषको अंश हो ः महिला पदार्थ हो भने पुरुष स्वरुप हो भनेर भन्दथ्यो ।
२०५८ साल जेठ २० । एसएलसी दिएका हामी बच्चाहरु खाटलाई बोर्ड बनाएर टेबल टेनिस खेल्दै थियाँै । घरमा बुवाले रातो एमेर्जेन्सी लाइट किनेर ल्याँउनु भएको थियो । त्यस्मा रेडियो, एफएम र क्यासेट सबै सुन्न मिल्थ्यो । चुम्बकलाई माथि पटी पल्टाएर माटोको घैँटोमा घोप्ट्याएपछि होम–मेड स्पिकर गज्जबको बज्थ्यो । त्यस दिन अचम्मै भएको थियो । बिहानदेखि नै सबै एफएम र रेडियोमा शोक धुनमात्र थियो । गाँउघरमा सबै अचम्मित थिए । कसैलाई केही थाह थिएन । घरको टीभीमा एन्टिभी मात्र आँउथ्यो । त्यस्मा पनि शोक धुन ।
अन्जना लामा महत || Poetry About Anjana Lama Mahat
ललितपुरको ढोलाहिटीमा घट्यो अचम्मैको घटना जेठाजुले बुहारी बुहारी काटेको लाग्छ सबैलाई सपना
डिजाइनर सुट वा सर्ट भनेको जस्तै डिजाइनर बेबी भनेको भविष्यको त्यस्तो बच्चा हो जुन तपाईंले आफ्नै इच्छा अनुसार डिजाइन गरेर जन्माउन सक्नु हुन्छ ।